Indlu yomqeqeshi | 5min ukusuka kuZiko leSixeko kunye neendawo zokupaka
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMike
Akukho ntlawulo yenkonzo yeendwendwe!
Siqhayisa ngeempawu zesiNtu ngokulungiswa kwale mihla, iNdlu yoQeqeshi yethu ixhotyiselwe ngokupheleleyo ukuhlala ziindwendwe, neendwendwe ezixhamlayo kwimvume yokuhlala yokupaka, intendelezo encinci yabucala, i-Wi-Fi eyomeleleyo, iNetflix, kunye neelinen ezintsha zomgangatho wehotele, kubandakanya iitawuli.
Indawo ejikelezileyo ine-buzz ezimeleyo kunye noluhlu lweevenkile. Umbindi wesixeko kukuhamba nje okufutshane, kwaye iCardiff Bay edumileyo yimizuzu emi-5 kuphela yokuqhuba okanye uhambo oluhle ecaleni koMlambo iTaff.
Iindwendwe zingena kwintendelezo encinci yangasese ehonjiswe ngetafile encinci kunye nezitulo, ezilungele ukuphumla phantsi kweenkwenkwezi (kunye nezibane ze-fairy) ebusuku okanye ukufumana ikofu kusasa.
Kumgangatho ongezantsi kukho indawo evulekileyo evulekileyo yekhaya, eyenziwe ngeesofa ezimbini ezitofotofo ukuze uphumle kwaye ubukele iNetflix, itafile eqinileyo yeplanga yokutyela enezihlalo ezine ngokukhululeka kunye nekhitshi langoku eligcweleyo elinazo zonke izinto ezibalulekileyo zokupheka, kunye ifriji encinci-ifriji, isitovu kunye ne-oveni, umatshini wokuhlamba kunye nokunye.
Eli gumbi lokulala liphangaleleyo lixhotyiswe ngebhedi elingana nenkosi ukuze yolule kuyo, itafile yokunxiba emdaka kunye nesipili kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi kunye nesiporo sempahla. Iilinen ezitsha zomgangatho wehotele zibonelelwa ngokubhukisha ngakunye.
Incinci, ishushu kwaye ipholile, igumbi lokulala lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini kunye nendawo yokugcina kunye nempahla kaloliwe.
Eli gumbi lokuhlambela elibanzi langoku liqhayisa ngeshawa kunye nenye isinxibo esinokugcinwa kunye nesipili. Ibhafu entsha kunye neetawuli zesandla zibonelelwa lundwendwe ngalunye, kunye neshampu kunye ne-conditioner.
Iindwendwe zinosetyenziso olululo lwephepha-mvume lokupaka indawo yokuhlala eliza kusetyenziswa kwiindawo eziphawulweyo ezingaphandle kwepropathi, ngelixa kukwakho neendawo zokupaka ezongezelelweyo zasimahla esitratweni.
*Nceda ujonge izikhokelo zasekhaya malunga neengcebiso zamva nje zokuhamba kunye nezolonwabo phambi kokubhukisha
Namhlanje le ndawo yamkelwa njengenye yeedolophu zaseCardiff ezizezona ziphezulu, zenziwe ziikhefi, iindawo zokusebenzela ekwabelwana ngazo kunye neendawo zokuhlala ezinefashoni.
Ukuhamba nje ngemizuzu eli-10 ukuya kwiziko leSixeko saseCardiff, indawo yokuthenga enkulu enevenkile eziziivenkile kwiQueen Street esihamba ngeenyawo, i-indie boutiques kwindawo edumileyo ye-Castle Quarter Arcades kunye nokutya okuvela kubavelisi basekhaya kwiMarike ePhakathi, iGrangetown ibekwe ngokugqibeleleyo nokufikelela ngokulula. kwiindawo ezininzi ezinomtsalane zaseCardiff. Kubandakanya nje i-5 min drive okanye i-20 min ukuhamba ukuya eCardiff Bay.
Ezinye zezinto ezinomtsalane zalapha ekhaya...
- I-Aquabus, inikezela ngeehambo phantsi koMlambo iTaff yonke indlela eya eCardiff Bay kunye neBarrage (i-5-min walk)
-I-Tramshed, indawo yokusebenza ebamba iintshukumo zasekhaya kunye nezokhenketho, iminyhadala kunye nemisitho (imizuzu emi-5 yokuhamba)
-I-Depot, indawo yeziganeko eziguquguqukayo ezibamba ubusuku obuvelayo (imizuzu eyi-9 yokuhamba)
-Ibala lemidlalo elidumileyo lePrincipality elisindleka umbhoxo wamazwe ngamazwe kunye nebhola ekhatywayo, kunye nemisitho emikhulu kunye neekonsathi (uhambo lwemizuzu eli-9)
-Yonwabela ubugcisa bexesha langoku kwimiboniso yedayinaso kwiMyuziyam yeSizwe yaseWales (uhambo lwemizuzu eyi-12)
-Ibala leMotorpoint, eyona ndawo inkulu yemiboniso eyakhelwe injongo yaseCardiff (imizuzu engama-20 yokuhamba)
- Inqaba yaseCardiff, eyona nqaba inomdla eWales (20-min walk)
-Ibala lebhola ekhatywayo leSixeko saseCardiff, ikhaya leeBluebirds ezinamandla (imizuzu engama-22 yokuhamba)
-ICardiff Bay, eyona ndawo inkulu yophuhliso lwamanzi yaseYurophu, lichibi elihle elinamanzi acocekileyo kunye nomda wamanzi ojikelezwe ziimpawu zomhlaba ezinomtsalane, imivalo, iindawo zokutyela kunye nolonwabo (imizuzu emi-5 yokuqhuba)
-Ilali yezeMidlalo yaMazwe ngaMazwe yaseCardiff, ebonelela ngokutyibiliza kuluntu, ukuqubha, ukukhwela amanzi amhlophe kunye ne-kayaking (i-10-min drive drive)
-I-Penarth Pier, ikhaya lesakhiwo esinesitayile sobugcisa se-1929 esihlaziyiweyo, sijonge ngokumangalisayo ngaphaya kwechweba laseSevern (imizuzu eyi-15 yokuqhuba)
Sishiya incwadana eyamkelekileyo kwindawo esinethemba lokuba iya kuphendula nayiphi na imibuzo enokuthi ivele, kunye nokubonelela ngolwazi lwendawo kunye neengcebiso. Sikhona xa kuyimfuneko.